Ama-FAQs - uLiaocheng Jiujiujiayi Fuel Injection Co, Ltd.
Amanani ethu angashintsha ngokuhambisana nokunikezwa nezinye izinto zemakethe. Sizokuthumelela uhlu lwamanani olusha ngemuva kokuthi inkampani yakho ixhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ngokukhiqizwa ngobuningi, isikhathi sokuhola izinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozi. Izikhathi eziholayo ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozithi yakho, futhi (2) sivunywa kokugcina kwemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu eziholayo zingasebenzi ngomnqamulajuqu wakho, sicela uye phezu kwezidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwanelisa izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Siqinisekisa izinto zethu zokwakha kanye nokwenza umsebenzi. Ukuzinikela kwethu ekwanelisekeni kwakho ngemikhiqizo yethu. Kwiwaranti noma cha, kuyisiko lenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izingqinamba zamakhasimende ezenelisa wonke umuntu
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha izingozi ezikhethekile zezinto eziyingozi nabathuthi abaqinisekisiwe besitoreji sokubandayo sezinto ezibucayi zokushisa. Ukufakwa kwengozi nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile
Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela eshesha kunazo zonke kepha futhi ebiza kakhulu. Ngokuthunga kwasolwandle ikhambi elingcono kakhulu lamanani amakhulu. Amanani ezimpahla ngqo singakunika wona uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.